Izixazululo Zokubuyiswa Kwezikweletu e-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Izixazululo zokuthola izikweletu e-UAE beziyinselelo enkulu kubantu okubolekiswe ngabo imali ngabanye abantu, kuze kufike ezingeni lokuthi badinga usizo kochwepheshe bezikweletu. Lapho izincwadi zinganakwa ngumuntu okweletayo, owenza iziqinisekiso ezingamanga futhi anikeze izizathu noma izinkinga eziningi, yisikhathi esifanele sokufuna usizo.
Ochwepheshe bokutakula izikweletu ikwenza ukwazi ukubuyisa imali ekweletwa abantu ngabanye ngokubamba iqhaza kwamaqembu ochwepheshe abacwaningi nabaqoqi. Lapho sekucaca ukuthi okweletayo akananhloso yokubuyisa imali, ochwepheshe baqala ukusebenza futhi bakusize ekubuyiseleni imali yakho ngezinqumo okuxoxiswane ngazo ngobungcweti. Ezimweni eziningi, bahlela imihlangano phakathi kwababolekisi nabakweletayo ukuze kwakheke umugqa wokuxhumana ozokusiza ukuthi uphinde uthole isamba.
Yini ngempela a isevisi yokutakula isikweletu ku-UAE empeleni wenza? Ngaphandle kwenzuzo ecacile yokuphatha nokunciphisa iqoqo lokukhokha kwamakhasimende, lingenza okungaphezu kwalokho ocabanga ngakho.
Ukuthola izikweletu ezihlukumezayo kuyisibonelelo esibonakalayo kakhulu sokuqasha izinsizakalo zokuqoqa izikweletu.
Ilungu langaphandle - Abaqoqi bezikweletu bazokwenza isebenza njengezinsizakalo zangaphandle onikwe umsebenzi wokuthola izinkokhelo. Njengoba abaqoqi bezikweletu kwenzeka ukuthi bafundisiwe futhi banolwazi lokuphatha zonke izinhlobo zokuqoqwa kwezikweletu nokuhweba ngezikweletu, kuzoba lula ukuthi inkampani ekweletwayo iqashe izinsizakalo ezinjalo ukuthola imiphumela yokuxazululwa kwemali ekhokhelwa ngempumelelo.
Bill - Ngenkathi ukubolekwa kwemali kanye nezikweletu kujwayelekile ezinkampanini eziningi, kusakhathaza kakhulu ukubhekana nalawo makhasimende ahlubukayo anqaba ukukhokha izikweletu zawo esezephuzile. Ukuqoqa izinkokhelo kungaba yinto ethikameza ikhasimende kanye nomnikazi wefemu. I-ejensi yokutakula imali cicela ukukhokhelwa okufanele egameni lenkampani.
Gada - Kuzoba lula kakhulu kubo ukuqapha izinkokhelo noma ukuxhumana kwebhizinisi, njengoba abaqoqi bezikweletu bangakwazi ukugcina amarekhodi avuselelwe emisebenzi yezikweletu zebhizinisi.
Isheke lesikweletu - Isevisi yokutakula futhi igcina imithombo efanele yolwazi, okwenza kube lula ukuvumela izinkokhelo ukuthi ziqoqwe. Izinsizakalo ezinjalo angenza isheke sesikweletu kumarekhodi angaphambilini amakhasimende ukuze amaklayenti angaqonda izimali zawo ezikhona. Ngenxa yolwazi oluqondile abakwazi ukuluqoqa, kuzoba kuncane kakhulu ukuvumela ukuba basungule imisebenzi namasu angasiza abantu bobabili.
Ukuqasha insizakalo yomuntu wesithathu ukuqoqa ukukhokhelwa kwezikweletu kungabiza umnikazi wenhlangano imali ethile. Abaqoqi bezikweletu ngokuvamile babiza inani eliphansi noma isamba esungulwe ngamaphesenti sezinsizakalo zokubuyiselwa izikweletu. Ngaphandle kwezindleko zale nsizakalo, abaninimabhizinisi abaningi bathola le ndlela ibiza kakhulu ngenxa yezinzuzo zayo.
Izixazululo Zokuthola Izikweletu e-UAE - Thola Usizo Lokumelana Nesikweletu
Ungayitholaphi lolu hlobo lwenkonzo?
Kungenzeka ubone izikhangiso zezixazululo zokuthola izikweletu nomaphi lapho ubheka khona. Umsakazo, amaphepha, omagazini, i-yellowpages, I-TV namabhodi amabhodi kanye newebhu zigcwele izikhangiso ezifinyelela kuzo zonke izindawo, njenge-UAE, Abu Dhabi, Dubai ne-Sharjah.
Ukukhokhiswa kwezikweletu isu elisetshenziswa kakhulu, elibandakanya ukuthola isikweletu ukukhokhela yonke imali obolekwe ngayo.
Indlela yokuphuma esikweletini
Njengoba ufuna amasevisi wezobuchwepheshe, njalo ukhethe izinsizakalo ezisize abantu ukuthi baphume esikweletini.
Ngokwengeziwe, hlela ukubuyiselwa kwemali yakho yesikweletu ngendlela engeke ithinte isilinganiso sakho sesikweletu. Uma ukwazi ukukhulisa amaphuzu akho esikweletu ngendlela yemalimboleko ehlanganisiwe, kungenzeka ukuthi ufanelekele amanani wenzalo angcono enyangeni eyodwa kuya kwezingu-36.
Cabanga ngamasu 'okuphuma esikweletini' afanele isimo sezezimali. Ngemuva kwalokho khetha amasu akuvumela ukuthi wandise isikhathi sakho nomzamo wakho. Lapho uthola izinketho zokubuyiselwa izikweletu ezikuvumela ukuba uphume ngokushesha kuleso simo, uzokwazi ukuthi impilo yakho kungenzeka ingabi nasikweletu maduzane.
Ochwepheshe ku izixazululo zokuthola izikweletu e-UAE baqonde kahle indlela yokunakekela izimo ezilula zokutakula.
Basebenzise ubuchwepheshe babo obukhulu; baqonda ukuthi iyiphi inqubo esebenza kahle kumuntu okweletwayo. Ngokusebenzisa ingcindezi enkulu kanye namasu afanele, abaqoqi bezezimali banqoba lapho abanye behlulekile. Ochwepheshe bakhonjisiwe ukuthi basebenza kahle ekutholakaleni imali ebibolekisiwe, ngobunzima obuncane.
Ukusetshenziswa kwabaqoqi abaqeqeshiwe kukhombisa kufayela lakho le- ababolekisi ukuthi uzoba sína ngokuthola leyo mali esikhungweni sakho sezezimali.
Izixazululo Zokubuyiswa Kwezikweletu E-UAE zisiza kanjani abantu?
(I) The Inqubo yokubuyisa ngokuvamile iqala ngocingo ukwenza okweletayo azi ukuthi ochwepheshe bathatha inqubo yokubuyisa isikweletu. Bayaziswa futhi ngemiphumela yokungakhokhi. Ukuvakashelwa komuntu ngamunye kuhlelwa lapho izingxoxo ocingweni zehluleka. Kwezinye izimo, abaqoqi basebenzisa izinhlelo zokusebenza zokulandela umkhondo ezithuthukile ukuzithola noma kuphi esifundazweni.
(II) The ukuba khona kwamahhovisi amaningi kanye neqembu labachwepheshe abanekhono nabazibophezele kusiza ukuqinisekisa impumelelo. Abaqoqi bazohamba noma yikuphi ezweni lonke ukuthola imali yakho. Amasu abo wokulandela umkhondo avelele afaka phakathi ukukhokha intela yemali engenayo, ukuzama ukuthola ipasipoti, nokuzama ukuthola izinyathelo ze-elektroniki ezenziwe ngumuntu okweletwayo njengokusebenzisa ikhadi lasebhange noma ukuzama ukuthola imali. Abakweletwayo bangalandelelwa kungakapheli amahora angama-24 kuya ngohlobo lolwazi olutholwe ngokuthungatha izinhlelo zokusebenza.
(III) Abaqoqi bezikweletu ngokuvamile babiza imali eyi-10 kuye ku-17% emalini eqoqiwe. Imali yokuphatha, okuyoba yingxenye yesamba esizoyithola, izokhokhiswa, kodwa iyobuyiselwa emuva ekuqedeni inqubo yokubuyisa.
Izixazululo zokubuyisa izikweletu e-UAE zisiza abantu abanobunzima ekubuyiseni imali abayitshalile.